मानसिकरोग अस्पताल – Health Post Nepal
दैनिक सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने मानसिकरोग अस्पताल पाटन पछिल्लो समय प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा चुक्दै गएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. मोहनराज श्रेष्ठ स्वयम् पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको स्विकार्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन नसक्नुका साथै मानसिकरोग अस्पताल सधैँ सरकारी पक्षको बेवास्ताको सिकार बनेका कारण प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न नसक्दा अस्पतालले बढ्दो बिरामीको चाप थेग्न नसकेको हो ।’ आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नभएकै कारण अस्पतालले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको दाबी श्रेष्ठको छ । अस्पतालमा जम्मा ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि हाल ४ जना मात्र कार्यरत छन् ।
नेपालमा करिब १ सय ५० को संख्यामा मानसिकरोग विशेषज्ञ छन् । तर, नेपाल सरकारमातहतका अस्पतालहरूमा खासै सेवा–सुविधा नभएका कारण उनीहरू सरकारी अस्पतालमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालगन्ज, बुटबललगायत केही क्षेत्रीय अस्पतालमा मानसिकरोग विशेषज्ञ उपलब्ध भए पनि ज्यादै न्यून रहेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सेवा–सुविधा बढाएर आकर्षित गर्न नसकिएका कारण उत्पादित जनशक्ति निजी अस्पतालतर्फ आकर्षित भएको हो ।
‘मन्त्री तथा नेताको फोन आएपछि बेड खाली भएमा उनीहरूका बिरामीलाई प्राथमिकता दिनु त्यति अस्वाभाविक कुरा भने होइन,’ राजनीतिक दबाब टार्न नसकिने आशय जताउँदै निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो हाम्रो अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, जुनसुकै अस्पतालमा लागू हुन्छ । देश नै यस्तो छ, अलिअलि सोर्सफोर्स त चलिहाल्छ । तर, चल्छ भन्दैमा बेड खाली नभएका वेला पनि नेताका बिरामी राख्नकै लागि भर्ना भएर उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निकालेर बेड खाली भने गरिँदैन ।’
मानसिक अस्पताल पाटनमा सबै पदमा गरी करिब ७० जनाको स्थायी दरबन्दी छ भने करिब ३० को संख्यामा अस्थायी तथा करारमा जनशक्ति कार्यरत छ । अस्पतालका दुईवटा युनिटमा दुई–दुईजना मानसिकरोग विशेषज्ञ छन् । बिरामीको चापअनुसार अस्पतालको भौतिक संरचनासमेत अपुग छ । मानसिकरोगसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमा कोठाको समेत अभाव छ ।
अस्पतालबाट मासिक करिब ४ हजार बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । कडाखालका मानसिकरोगीलाई भर्ना लिएरै उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको केन्द्रीय मानसिक अस्पतालका रूपमा वर्गीकरण गरिएको मानसिकरोग अस्पताल पाटन हाल ५० बेडमा सञ्चालन भइरहेको छ । बिरामीको चापअनुसार अस्पतालका लागि उक्त बेडसंख्या अपर्याप्त भएको निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । बेडसंख्या ५० बाट बढाएर १०० पु-याउनका लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गरे पनि कुनै पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका सबै अस्पताललाई एकरूपता प्रदान गरिने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
बेड अभावकै कारण अस्पतालमा सेवा लिन आएका कतिपय बिरामीलाई निजी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको गुनासो छ । भर्ना गरी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका कतिपय बिरामीलाई अस्पतालले ललितपुर किस्ट अस्पतालमा रेफर गर्ने गरेको छ । अस्पतालले प्रत्येक युनिटमा एकजना इन्चार्ज तोकेर उपलब्ध जनशक्तिको यथासम्भव व्यवस्थापन गरी सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेका कारण मानसिक अस्पताल पाटनमा कर्मचारी समन्वय अभावले समस्या निम्त्याएको भनी फिँजाइएको हल्ला तथ्यहीन रहेको निर्देशक श्रेष्ठको दाबी छ ।
वेला–वेलामा नेता तथा सांसदले आफ्ना मान्छेको उपचारका लागि फोनमार्फत दबाब दिने गरेको नमिठो अनुभव सुनाउँछन् निर्देशक श्रेष्ठ । तर, अस्पतालले भनसुनका आधारमा कम र उपचारका लागि पहिले अस्पताल आउनेलाई बढी प्राथमिकतामा राखी सेवाप्रवाह गर्दै आएको उनी दाबी गर्छन् । ‘मन्त्री तथा नेताको फोन आएपछि बेड खाली भएमा उनीहरूका बिरामीलाई प्राथमिकता दिनु त्यति अस्वाभाविक कुरा भने होइन,’ राजनीतिक दबाब टार्न नसकिने आशय जताउँदै निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो हाम्रो अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, जुनसुकै अस्पतालमा लागू हुन्छ । देश नै यस्तो छ, अलिअलि सोर्सफोर्स त चलिहाल्छ । तर, चल्छ भन्दैमा बेड खाली नभएका वेला पनि नेताका बिरामी राख्नकै लागि भर्ना भएर उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निकालेर बेड खाली भने गरिँदैन ।’
Posted in खबर, मानसिक स्वस्थ्य, मुख्य खबरTagged मानसिकरोग, मानसिकरोग अस्पतालLeaveaComment on एक मात्र मानसिक अस्पतालको बेहाल- विशेषज्ञ दरबन्दी नौ, कार्यरत चार